အာရှတစ်ဝှမ်း ဟုန်းဟုန်းတောက်နာမည်ကြီးနေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ သင်္ကြန်ဓာတ်ပုံများ – XB Media Myanmar
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင်တဲ့ နေရာမှာ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် သရုပ်ဆောင်ပြသပေးနိုင်ခဲ့ပြီး အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲရောက်အောင် ချပြပေးနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အများရဲ့ ချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ သူမကတော့ အချိုးကျလှပတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အပြုံးချိုပြီး အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မျက်နှာထားလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရှိခဲ့ရတာကြောင့် လူအများရဲ့အလယ်မှာ တင့်တယ်ပြီး အလှကြီးလှပနေခဲ့ရတဲ့ သူလေးတစ်ယောက်ပါ။
အများရဲ့ အလယ်မှာတင့်တယ်ပြီး လှပနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုကတော့ လှပတဲ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သင်္ကြန်ဖက်ရှင်လေးကြောင့် အာရှတစ်ဝှမ်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် နာမည်ကြီးနေခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အိချောပိုရဲ့ သင်္ကြန်ဖက်ရှင်လေးတွေကလည်း ပုရိသတွေ တကယ့်ကို စွဲမက်စေနိုင်လောက်တဲ့ ဖက်ရှင်ဆန်းဆန်းလေး ဖြစ်ခဲ့ရတာပာ။
Rung Suphaphorn KuprasitRung Suphaphorn Kuprasit ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အိချောပိုကတော့ အာရှတစ်ဝှမ်းမှ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုပါ ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အချိုးကျနလှပတဲ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီလွန်းလှတဲ့ အဝတ်အစားကြောင့် အာရှတစ်ဝှမ်းမှာနာမည်ကြီးပြီး ပုရိသတွေအသည်းစွဲခဲ့ရတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဆက်လက်ပြီး ကြည့်ရှုအားပေး သွားကြပါဦးနော်။
လှပအချိုးကျလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကြောင့် ပြည်ပကလူတွေပါမကျန် စိတ်ဝင်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ အိချောပိုကတော့ ” The Famous Myanmar girl. How did she make his body so good? This is calledagood body. Someone went to Myanmar and took it. ” ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ့ ကိုယ်လုံးအလှကို တင်စားခြင်းခံလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အာရှတစ်လွှားမှာ ၀က်ဝက်ကွဲအောင် အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အိချောပိုဟာ အပြင်မှာလည်း တကယ်ကိုပဲ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေခဲ့တာကြောင့် သံသယတောင် ဖြစ်စရာမလိုပါဘူးနော်။ သင်ကော ဒီလို စွဲမက်ဖို့ကောင်းတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံတွေကို မြင်အပြီးမှာ အသက်ရှု မှားသွားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လား..??
လှပတဲ့ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဝတ်စားထားတဲ့ သင်္ကြန်ဖက်ရှင်လေးကြောင့် အာရှတစ်ဝှမ်းမှာ လျှမ်းလျှမ်းတောက် အောင်မြင်နေတဲ့ အိချောပိုရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ရင်း အရမ်းကို လေးစားအားကျမိတယ်ဆိုရင် Share ပြီး အားပေးသွားကြဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦးနော် မိုမိုလေး ပရိသတ်ကြီးရေ။ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးရင်း ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးနေဆဲဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုကို ဆက်လက်ပြီး ချစ်ပေးအားပေးကြပါဦးနော်။ ကြည့်ရှုအားပေးကြပါသော ချစ်ပရိသတ်များအပေါင်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။